Warshadaha Shiinaha Pouf P033 iyo alaab-qeybiyeyaasha | Qalabka Dcl
Shayga No: P033
Qalabka: Pouf, dharka sare ee dharka ah oo leh faraantig dahab ah.
Cabirrada: φ460mm * 420mm
Cabbirka xirmada: 48cm x 48cm x 44cm
Miisaanka saafiga ah: 5kg / pc
Miisaan culus: 6.5 kg / ctn
Loading Capacity: 620 pcs / 40HQ
Dekadda Loading: Tianjin, China Mainland
Dharka dharka lagu ciyaaro ee leh rhombus waa sheyga raaxada iyo qaabka dhawaanahan. Midabkeeda cagaaran iyo saldhigyada midab-bir leh ayaa si buuxda ula socda qurxinta casriga ah. Poufkani waa cunsur aad u tiro badan, halkaas oo aad ku ridi karto kantaroolka fog ama cagahaaga gelin karto. Waxay ku dhejin kartaa meesha qolka fadhiga iyo qolka jiifka, oo ah albaab albaab aad ku beddeli karto cagahaaga.
Shayga No. P033
Shayga Cabirka (W * D * H) φ460mm * 420mm
Qalabka-Dharka Laydhka / Fiilo / maqaar
Qalabka-Frame Bir daxal laheyn
Qaabka Casri ah
Xidhmada Bacda lafaha & boorsada EPE
Goobta asal ahaan Shiinaha
Wareegga dahabka ah ee hoose wuxuu ka samaysan yahay bir aan kala go 'lahayn, kaas oo xajinta ka dhigaya mid deggan oo u muuqda mid deggan oo nadiif ah.
Rhombus waa sheyga cusub ee fashion, taasoo ka dhigaysa pouf inuu u muuqdo mid xarrago leh.
Khadadka dhogorta leh waxaa loo arki karaa si aan kala sooc lahayn, oo dharka ka dhigaysa mid weyn, oo kordhiya dhadhanka poufka oo dhan.
Gudaha pouf waa gudiga MDF, xumbo qaro weyn oo ka baxsan gudiga oo ay ku jiraan koollo warshadeed, ka dibna shaqaaluhu daboolka ayey ka dhigaan dhammaantood.
Ka sokow midabka cagaarka, midabka cas wuxuu sidoo kale caan ku yahay macaamiisha suuqyada kaladuwan. Dabcan midab kale oo aad rabto, waxaan ku siin karnaa dhibaato la'aan. Iyo hadaad rabto qaab kale sida xarig korka ah, hadhuudhka iskutallaabta, ama xitaa qaab la'aan.
Pouf waa hal gabal oo sanduuq ku yaal. Waxaa daboolaya bacda PP ama boorsada xumbo leh EPE. Ka dib ku dheji kiiska daroogada caadiga ah. Haddii aad leedahay shuruudo gaar ah oo ku saabsan xirmada, waan isku dayi karnaa.
Emayl: sales@dclfactory.com Mob: +86 13682157181
Hore: Madaxa PP oo leh Lugta Birta kuleyliyaha kuleylka leh
Xiga: Saxarada S026A, S026B